10 सुझावहरू आकारमा रहँदा यात्रा गर्दै | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 सुझावहरू आकारमा रहँदा यात्रा गर्दै
यात्रा गर्दा आकार मा रहन एक निस्सन्देह एक चुनौती हो. लोभ्याउने खानाहरू सधैं प्रस्तावमा हुन्छन्. यो तपाइँको सामान्य व्यायाम दिनचर्यामा ब्रेकको साथ मिलेर हुन्छ जुन अक्सर फिटनेस वैगनबाट झर्दछ. त्यसोभए कसरी एक जना यात्रामा फिट रहन्छ? यो तपाईको सोच जस्तो कठिन छैन. केवल केहि सरल नियमहरूमा टाँसिनुहोस्, केही इच्छाशक्ति प्रयोग गर्नुहोस्, र तपाईं उही महान स्वास्थ्यमा घर आउन सक्षम हुनुहुनेछ जुन तपाईंको छुट्टीको साथ शुरू भयो.
रेल परिवहन भएको इको-मैत्री मार्ग यात्रा हो. यस लेखमा द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ एक ट्रेन सेव, सस्तो ट्रेन टिकट वेबसाइट संसारमा.
धेरै फिट रहन सकेसम्म हिंड्नुहोस्
हुनत सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दै सजिलो योजना जस्तो लाग्न सक्छ, सट्टा हिड्ने प्रयास गर्नुहोस्. छोटो दूरी ती व्यक्तिहरूको लागि उत्कृष्ट छ जो अत्यन्त फिट छैनन्, यद्यपि अधिक तपाईं गर्नुहुन्छ, यात्राको क्रममा तपाईंको फिटनेस बढ्ने छ. लामो चाँडो पैदल यात्राले सबै भिन्नता बनाउन सक्दछ आकारमा रहँदा जो पहिले नै एकदम फिट छन् उनीहरूको लागि यात्रा गर्दै. तपाईंको बस वा ट्याक्सीमा केही ब्ल्याकहरू लिनु अघि विचार गर्नुहोस् ताकि तपाईं बाँकी हिंड्न सक्नुहुन्छ. ट्रेनहरू छन्, को पाठ्यक्रम, यो एक उत्तम तरीका देश बाट देश मात्र होइन, शहर शहर र शहर भित्र पनि. केही ट्रेनहरू तपाईको रेलबाट छिट्टै जानुहोस्, र तपाईंको छुट्टी गन्तव्यको साइटहरू र ध्वनिहरू लिनुहोस् यात्रामा आकारमा रहन तपाईंको क्षमता अधिकतम बनाउनको लागि.
सहि सामान प्याक गर्नुहोस्
यदि तपाईं यात्राको बखत आकारमा रहनको लागि योजना गर्नुहुन्छ भने दौडमा जानको लागि तयारी गर्नुहोस्, वा पैदल यात्रा, वा साइकलिंग पनि तपाईसँग यो निश्चित हुन आवश्यक छ कि तपाईंसँग सही उपकरण छ. यो प्याकिंग हुँदा यो दिमागमा राख्नुहोस्. यदि तपाईंले अर्को जुत्ता स्मार्ट जुत्ता वा स्नीकरको एक जोडी बीच छनौट गर्नुपर्नेछ, स्नीकर्स प्याक गर्नुहोस्. सुन्दर गन्तव्यमा पुग्नु भन्दा खराब केहि छैन, महसुस गरेर कि तपाईं वास्तवमै एक रन चाहानुहुन्छ, र सक्षम छैन किनभने तपाईं घर मा सही गियर छोड्नुभयो. चाँडै उठ्नु र टहलको लागि जानु नै दर्शनीय स्थलहरूको एक उत्तम तरिका हो. सबैजना ओछ्यानबाट बाहिर हुनु भन्दा पहिले, संसार शान्त र सुन्दर छ. तपाईं जीन्स र बुटमा यो गर्न सक्नुहुन्न.
छुट्याइएको 15 यात्रा गर्दा आकारमा रहन मिनेट
यात्रा गर्दा आकारमा रहनु भनेको व्यायामको बारेमा हो. यदि तपाई धेरै खाना खान्नुहुन्छ भने यात्राको बखत तपाईको मांसपेशी र फिटनेस कायम राख्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न, धेरै पिउने पेय, र कुनै कसरत नगर्नुहोस्. तपाईंलाई केवल आवश्यक छ 15 मिनेट हरेक बिहान मिनी कसरत प्राप्त गर्न. यदि तपाईं प्राकृतिक क्षेत्र जस्तै समुद्री तटमा हुनुहुन्छ भने, यो धेरै व्यस्त हुनु अघि बाहिर जानुहोस्, र बालुवामा योग वा बल प्रशिक्षण गर्नुहोस्. कार्डियो एक रनको साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ, पदयात्रा, वा तेज पौडी खेल्नुहोस्. छोटोका लागि युट्यूबसँग धेरै उत्कृष्ट भिडियोहरू छन्, छुट्टी-आधारित कसरत यात्रा र फिटनेस सुधार गर्न को लागी. साँझ मा overindulge छैन प्रयास गर्नुहोस्, किनकि यसले तपाईंको बिहानको कसरतलाई असर गर्छ र अन्तत: तपाईं यात्रामा कति राम्रो आकारमा बसिरहनुभएको छ.
ब्रुसेल्स बाट ब्रुज टिकटहरू
एन्ट्वर्प टु ब्रुज टिकटहरू
ब्रसेल्स भियना टिकटहरु
Bruges टिकटहरू गेन्ट
स्वस्थ खाना द्वारा यात्रा गर्दा आकार मा रहनुहोस्
स्वादिष्ट, बटरी क्रोइसेन्ट्स र अन्य गुडीहरूले तपाईंलाई सिसा काउन्टरको पछाडिबाट संकेत गर्न सक्दछन्, तर यो सधैं एक उत्तम विचार इच्छा शक्ति को एक मध्यम राशि कायम गर्न को लागी हो. व्यवहार गर्नुहोस्, कुनैपनि तरिकाले, तर ओभरबोर्डमा जानु हुँदैन. बिहानको खाजामा केहि फल लिनुहोस्, र खाजाको लागि सलाद तपाईलाई यात्रामा आकारमा रहन सहयोग गर्न. That way you have kept your calories low enough to be able to indulgeabit inadinner.
यात्रा गर्दा आकारमा रहनु सिढीहरू लिएर
यदि तपाईं धेरै फ्लोरहरूको साथ होटेलमा बस्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग उत्तम अवसर छ! लिफ्ट लिनुको सट्टा, सीढी लिनुहोस्! बानीको यो साधारण परिवर्तनले तपाइँको दिनमा कार्डियोको एक धेरै धेरै पाउनेछ, र तपाईंलाई धेरै स्वस्थ र फिटर यात्राको लागि सेट अप गर्दछ. यदि तपाईंसँग कुनै सीढीहरू वा केवल एउटा उडान छैन भने, तपाईंको नजिकको क्षेत्रमा केहि पत्ता लगाउनुहोस् र यात्रा गर्दा आकारमा रहनको लागि मद्दतको लागि केही पटक तिनीहरू माथि दगुर्नुहोस्.
म्युनिच टिकट डसेलडोर्फ
ड्रेस्डेन म्यूनिख टिकटहरु
पेरिसदेखि म्यूनिख टिकटहरू
ब्युन म्यूनिख टिकटहरु
यात्रा गर्दा आकारमा रहनको लागि एउटा बाइक राइड गर्नुहोस्
हामीले बसलाई लिनुको सट्टा हिंड्नु भनेर नै हामीले सुझाव दियौं, यातायात समात्नुको सट्टा साइकल भाँडामा लिनुहोस्. धेरै देशहरुमा हुनेछ भाडाका लागि बाइकहरू उपलब्ध छन्. आफ्नो गन्तव्यको नजिकै ट्रेन पु C्याउनुहोस्, र त्यसपछि बाइक राईडको बाँकी मार्गमा लिनुहोस्. जब तपाई फर्कनु चाहानुहुन्छ, केवल फिर्ता चक्र रेल स्टेशन र आफ्नो बाइक छोड्नुहोस् जहाँ तपाईं यसलाई फेला पार्नुभयो, यात्रा गर्दा आकारमा रहन को लागी राम्रो छ!
बर्पेन टिकट कोपेनहेगन
स्थानीय गतिविधिहरू जाँच गर्नुहोस् र यात्रा गर्दा आकारमा रहनुहोस्
धेरै देशहरूमा सहरहरु मा योजना बनाई स्थानीय पछाडि छ. योग वा क्यालिस्टेनिक्स पार्क वा मा संगठित वृद्धि प्राय: उपलब्ध छन्. यी गतिविधिहरूमा सामील हुनुहोस् यात्रामा आकारमा रहनको लागि. क्रसफिट फिटनेस सुधार गर्ने अर्को विश्वव्यापी घटना हो, त्यसैले कक्षामा सामेल हुनको लागि तपाइँको तालिकाबाट केही समय लिनुहोस्, या त भित्र वा बाहिर. तपाईको स्थानीय गाइड वा द्वारपाल तपाईलाई यिनीहरूका लागि सहि दिशामा देखाउन सक्षम हुनुपर्दछ.
रेल स्टेसनहरू र एयरपोर्टहरू हिड्ने ट्र्याकहरूको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
एउटा ट्रेन मा यात्रा को रूप मा धेरै मजा छ, व्यायामको लागि त्यहाँ त्यति अवसर छैन जब तपाईं वास्तवमै गतिशील हुनुहुन्छ. हवाईजहाजका लागि पनि त्यस्तै हुन्छ. जब तपाईं आफ्नो उडान वा ट्रेनको लागि पर्खंदै हुनुहुन्छ, केहि ईयरफोनमा प्लग गर्न मौका लिनुहोस् र यात्राको बखत आकारमा रहन सहयोग गर्नको लागि टर्मिनलको वरिपरि एक चाँडो टहलनुहोस्. यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सामानहरू पहिले सुरक्षित छन्, तथापि! तपाईको विश्वासघात कसैसँग सँधै तपाईंको क्यारी-अप छोड्नुहोस्. तपाईं हिंड्दा, टहलमा केही lunges सम्मिलित गर्नुहोस्. तपाईं हास्यास्पद लाग्न सक्छ, तर तपाईंको शरीर पछि धन्यवाद हुनेछ. यात्राको बखत आकारमा रहन प्रत्येक अवसर आफैंमा प्रस्तुत गर्नु समावेश छ. अब यहाँ तपाईंको रेल टिकट बुक गर्नुहोस्, र आफैलाई आकारमा रहन उत्पादक रूपमा प्रयोग गर्न अतिरिक्त समय दिनुहोस्!
यात्रा गर्दा तपाईंको फिटनेस ब्यान्डहरू आकारमा रहनको लागि प्याक गर्नुहोस्
व्यायाम ब्यान्डहरू हल्का छन्, यात्रा गर्न सजिलो र ट्रिम रहनको लागि उत्तम तरिका. तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो कोठामा सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ, र सब भन्दा सुविधाजनक ठाउँमा मिनी-जिम सर्किट सिर्जना गर्नुहोस्. तपाईंको सर्किटको राउन्ड वा पाँच कार्य गर्न प्रत्येक दिन समय लिनुहोस्, र तपाईं सबै स्वादिष्ट पेस्ट्री खान को बारे मा खराब महसुस छैन.
तपाईंको रक्सी सीमित गर्नुहोस्
पोखरीको छेउमा त्यो ककटेल छ, वा पबमा हिमपात बियर सधैं राम्रो हुन्छ. यो अधिक गर्नाले तपाईंको फिटनेसमा खस्नेछ. केवल चिनीको कारणले होइन तर भोलिपल्ट प्रेरणाको अभाव पनि हो. तपाईं चाहनुहुन्छ भने अनौंठो पेय छ, तर तिनीहरूलाई न्यूनतम राख्न प्रयास गर्नुहोस्. याद गर्नुहोस् कि मीठा मिठो ककटेलहरू क्यालोरीमा धेरै हुन्छन्, जस्तो बियर रसमेत सेतो मद्य हो. यात्राको बखत आकारमा रहन सहयोगको लागि उनीहरूलाई कार्य गर्न तपाईंको योजनाबद्ध कसरतलाई कडा बनाउनेछ.
यात्रा धेरै जसो केसहरूमा धेरै रमाईलो हुन्छ. यो सक्छ, तथापि, कुनै पनि फिटनेस व्यवस्था को लागी धेरै विघटनकारी हुनुहोस्. यात्रा गर्दा आकार मा रहन एक स्वस्थ खानपान कार्यक्रम मा चिपकाउनु र जब तपाईं सक्नुहुनेछ धेरै व्यायाम मा प्राप्त समावेश छ. मीठो मादक पेयपदार्थहरू सीमित गर्न नबिर्सनुहोस्. छनौट गर्नुहोस् एक ट्रेन सेव, हामी तपाइँलाई तपाइँको यात्राको मजा लिन मद्दत गर्न चाहन्छौं!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 सुझावहरू आकारमा रहँदा यात्रा गर्दै” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/tips-staying-shape-traveling/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
निम्न लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- यो लिंक अंग्रेजी मार्गहरू अवतरण पृष्ठ लागि हो, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, र तपाईं es fr वा nl मा र तपाईंको छनौटको अधिक भाषाहरूमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ.
europetravel longtrainjourneys स्टेफिट StayInShape रेल यात्रा Travelingtips
राजा दिवस Celebrating नेदरल्यान्ड्स मा (राजाको)